Ma Ku Saabsan Naga Bogga Ma Raacdaa Dhaqamadahan Ugu Wanaagsan? | Martech Zone
An Nagu saabsan Boggu waa mid ka mid ah bogagga lagu faahfaahiyay liis kasta oo hubin ah. Waa bog ka dhib badan shirkadaha ay u siiso sumcadda. A weyn Nagu saabsan bogga badanaa waxaa fiiriya shaqaalaha mustaqbalka iyo macaamiisha si ay wax badan uga bartaan dadka ka dambeeya shirkad. Waxaan badanaa ilaawnaa inaysan ahayn kaliya sifooyinka iyo faa'iidooyinka rajooyinka la heli doono ka dib - waxay rabaan inay dareemaan kalsooni inay la shaqeynayaan dad ay ku kalsoon yihiin oo aysan ka qoomameyn doonin!
Kalsoonida iyo ixtiraamka waa waxyaabo ay tahay in la kasbado. Ogaalku wuxuu ka yimaadaa maskaxda ugu sarreysa. Kuwani dhammaantood waa inay noqdaan yoolalka ugu dambeeya ee istiraatiijiyadda suuqgeyntaada, laga bilaabo SEO iyo suuqgeynta nuxurka illaa warbaahinta bulshada iyo emaylka. Bogga shirkaddaada ee Ku Saabsan Waa fursad kale oo aad ku sheegto sheeko kaa caawin doonta inaad maskaxda macaamiishaada ku dhegto. (Iyo sida Buluug Acorn's Daraasadu waxay cadeyneysaa, sidoo kale waa fursad iib.) Vincent Nero, Khabiir ku takhasusay Suuq geynta Mawduuca
Siege Media waxay falanqeeyeen waxa ka dhexeeya waxqabadka sare ee ku saabsan Boggaga Us oo waxay soo ururiyeen maqaal epic ah oo soo muuqday 50 Dhiirrigalin nagu saabsan Tusaalooyin Bogga. Waxay soo saareen sawir gacmeedkan quruxda badan oo muujinaya 11 dhaqamada ugu fiican ee la raacayo sida aad adigu u qaabeyneyso naftaada:
qiimaha hindise - ku dheji qiimeyntaada qiimaha ka sarreeya laabka ay isticmaaleyaashu ku qaataan 80% waqtigooda.
Faa'iidooyinka - macaamiisha waxay doorbidaan akhrinta waxtarka wanaagsan ee aan fiicnayn.
Dareen Qiiro - rajadaadu waxay noqon doontaa 2 ilaa 3 jeer oo ay u badan tahay inaad la fal gasho sheeko shucuur leh si aad saameyn ugu yeelato.
Video - inta badan dadka go'aan qaata waxay doorbidaan daawashada fiidiyow halkii ay ka akhrin lahaayeen qoraalka bogga.
Founder - ku dar sawir la aqoonsan karo oo ah aasaasaha shirkaddaada, waxay kordhin doontaa beddelaadda 35%!
Photos - macaamiisha waxay kubixiyaan 10% waqti dheeri ah fiirinta sawirada marka loo eego aqrinta qoraalka bogga. Splurge xoogaa tallaal xirfadeed ah!
Ma Lahan Sawirro Keyd ah - sawirada kaydka ah ma ahan kaliya blah… dhab ahaantii waxay fure u yihiin kalsooni darro shirkadeed.
Markhaatiyadayada - markhaatiyada macaamiisha waxay kordhiyaan iibka 34%!
Faallooyin togan - 72% dadku waxay yiraahdaan dib u eegista wanaagsan waxay ka dhigeysaa inay aaminaan meherad maxalli ah inbadan.
Wicitaanka Waxqabadka - maxaad ka rabtaa booqdaha inuu sameeyo ka dib markay dib u eegaan boggaaga? Seddex beddelasho adoo kudaraya CTA!
Contact Info - 51% dadku waxay u maleynayaan in macluumaadka xiriirka ee dhameystiran uu yahay cunsurka ugu muhiimsan ee ka maqan bogagga internetka. (Waxaan jecel nahay inaan ku dhigno lugta bog kasta!)
Waa tan faahfaahinta, Sayniska ka dambeeya weyn ee nagu saabsan Bogagga.
Tags: ku saabsannagu saabsanwax ku saabsan anaga dhaqanka ugu fiicannagu saabsan walxaha bogganagu saabsan bogaggahababka ugu wanaagsanSiege MediaSayniska ka dambeeya weyn ee nagu saabsan BogaggaVincent Nero